Wasaaradda Gaadiidka oo Sameyn Khadka Isbitaalka Magaalada Bursaray | RayHaber | raillynews
[09 / 04 / 2020] Corona Karantinası Uygulanan Yerlerin Sayısı Açıklandı	06 Ankara
[08 / 04 / 2020] Fayraska cudurada faafa ee wadnaha ayaa laga ilaalin doonaa Hayat Eve Sığar Mobile Application	06 Ankara
[08 / 04 / 2020] 1150 TL Caawinaada Kirada ee Kiraystayaasha Gobolka!	06 Ankara
[08 / 04 / 2020] Taageerada Mushaharka ayaa u socota kuwa leh fasax xor ah	06 Ankara
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaWasaaradda Gaadiidka Inay Sameyso Khadka Cisbitaalka Magaalada Bursaray
25 / 02 / 2020 16 Bursa, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY
bursaray waxay noqon doontaa wasaarad gaadiid ilaa qadka isbitaalka magaalada
Go'aanka Golaha Wasiirrada, ee saadaaliyay in la kordhin doono Khadka Shaqaalaha ee Bursaray, oo uu ku saxeexan yahay Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan, Isbitaalka Magaalada, ayaa lagu daabacay Rasmiga Rasmiga ah.
Duqa Magaalada Bursa Metropolitan Alinur Aktaş wuxuu sii wadaa inuu midho dhal u noqdo shaqada degdegga ah ee uu si buuxda ula shaqeynayay Ankara. Bishaaro wanaagsan ayaa timid Bursa, oo horay war wanaagsan uga heshay Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalooyinka iyo Wasaaradda Ciyaaraha, Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha. Qadka Xawaaraha Sare iyo isku xirka Isbitaalka Magaalada ee Khadka Shaqaalaha Labour, oo sidoo kale lagu soo daray caddeynta doorashada ee Madaxweyne Aktaş, waxaa sameyn doona Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha marka go'aanka Golaha Wasiirrada.
Waxaa u saxeexay madaxweynaha
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa horey u faray Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha in ay qadkaan u sameeyaan wasaarad, arrinta ayaa noqotay mid rasmi ah xalay. Go'aanka Golaha Wasiirrada ee Wax ka-beddelka Go'aanka ee Go’aaminta Xaaladdaha la xidhiidha Ku-meelaynta, Qaadashada iyo Dhameystirka Nidaamka Gadiidka Waddooyinka Maxalliga ah, Saldhigyada iyo Goobaha La Xiriira ee Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha, Khad Dheeraadka Isbitaalka Magaalada ee cusbitaalka ayaa la raaciyay. Go'aanka waxaa lagu soo daabacay Rasmiga Rasmiga ah oo uu ku saxiixnaa Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan oo dhaqan galay. Go'aankaan, khadka ku fidin doona qadka Bursaray Emek ilaa Isbitaalka Magaalada waxaa sameyn doona Wasaaradda Gadiidka iyo Kaabayaasha. Laga bilaabo qadka habeen dambe ee dhamaadka Saldhigga Shaqaalaha, 4,59 saldhig ayaa loo qorsheeyay khadka 4 km. Dhererka xariiqu wuxuu noqon doonaa 6 kilomitir oo leh khadka bakhaarka.
Ku socoshada wadada gaadiidka
Duqa Magaalada Bursa Metropolitan Alinur Aktaş, wuxuu xasuusinayaa in Madaxweyne Erdogan uu horay u amray Wasiirka Gaadiidka ee ku saabsan isku xirka khadka shaqada ee Isbitaalka Magaalada, isagoo carrabka ku adkeeyay in amarkan uu hadda noqday mid rasmi ah. Bursa, oo leh awood sariirta guud ah oo dhan 745 sariirood oo ku yaal 365 isbitaal oo kala duwan, oo ay ku jiraan guud ahaan, takhtarka uurjiifka, ubadka, wadnaha, jimicsiga jirka, dhaqancelinta jirdhiska iyo baxnaaninta (FTR), cilminafsiyeedka sare ee amniga maskaxda (YGAP), oo laga dhisay aag dhan 6 kun 355 mitir oo isku wareeg ah oo kuyaala degmadaü Districtüğ Doğanköy District. Isagoo caddeeyay in gaadiidka loo raaco Isbitaalka Magaalada aysan dhibaato ku aheyn maalgashigan, Duqa Magaalada Aktaş wuxuu yiri, “Ka sokow, shaqooyinka aan qabanay iyadoo Dowlada Hoose ay si fudud oo fudud ugu socoto Isbitaalka Magaalada. NOSAB oo ka socota Isutagga Altınşehir Cevizli Hawlaheena wadooyinku waxay ku dhamaadeen qiyaastii 3 kiiloomitir ilaa wadada. Hawsha la wareegidda marxaladda labaad, 3500 mitir, ayaa socota. Marka la barbardhigo dhicitaanka shaqooyinka la wareegidda, Isbitaalka Magaalada waxaa lagu gaarsiin doonaa qaab wanaagsan oo leh qiyaas ahaan 6,5 - 7 kiilomitir. Isla mar ahaantaana, waxaa suurta gal ah in lagu qaado gawaarida culus ee sunta culus ee NOSAB loona yaqaan 'Ring Road' iyagoon soo galin magaalada. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo Madaxweynahayaga, wasiirrada ay khusayso iyo kuxigeenada ee sida joogtada ah ula socda arrinta, gaar ahaan taageerada ay u fidiyaan khadka tareenka ee Cusbitaalka Magaalada. ”
Wasaaradda Gaadiidka si ay u shaqaaleysiiso shaqaalaha naafada ah iyo kuwa dambi xukumay
Esenboğa ayaa ka dhigi doonta Khadka Metrooga Wasaaradda Gaadiidka
Isbitaalka Bursaray ee Magaalada Aktas 'Goal 2019
Sidee Khadadka Isbitaalka Magaalada Bursaray ay Saameyn ugu Yeelanayaan Wadada Isku-Dhaafka Mudanya?
Wasaaradda Gaadiidka ayaa bilowday inay ka shaqeyso wadiiqada u dhaxeysa Bandirma iyo Caanakkale.
Wasaaradda Gaadiidka tareenka isku xira Bandırma iyo Çanakkale…
Dhismaha jidka tareenka ee Cayyolu, oo Wasaaradda Gaadiidka la wareegtay, ayaa Axadda bilowday.
Ilaalin khaas ah ee Xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka ee Isbitaalka Eşrefpaşa
Maanta Taariikhda: 9 April 1921 Baarlamaanka, sharcigu wuxuu u kala qaybsan yahay Tareenka Anatolia-Baghdad
Kovid-19 Cudurka dilaaga ah wuxuu kusii fidaa dalkeena iyo aduunka oo dhan
Kovid-19 in laga hortago Mashruuca Raadinta Faafida
Waad ku mahadsantahay TCDD Authorityzmir Port Authority Talaabooyinka Cudurka Fayraska Wadnaha
Fayraska cudurada faafa ee wadnaha ayaa laga ilaalin doonaa Hayat Eve Sığar Mobile Application
1150 TL Caawinaada Kirada ee Kiraystayaasha Gobolka!
Taageerada Mushaharka ayaa u socota kuwa leh fasax xor ah
Qalliinka TCDD ee Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Bursa waxaa loo gudbiyey AYGM
Gaadiidka Elazığ wuxuu sii wadaa Howlaha Wadada si loo Buuxsado
Codsiga Xirmooyinka Caafimaadka ee Laydhka Cas ee Mersin
Adeeg gaar ah ayaa loo qoondeeyay Xirfadlayaasha daryeelka caafimaad ee Izmir